रिलमा भयानक, रियलमा साधारण मेनुका प्रधान (फोटो फिचर)
चलचित्र ‘रेसम फिलिल’बाट उदाएकी नायिका हुन् मेनका प्रधान । तर उनी आफूलाई नायिका भन्दा कलाकारको रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् । हुन पनि मेनकानै मुख्य नायिका भएको चलचित्र खासै आएका छैनन् । रंगमञ्च हुँदै चलचित्रमा प्रवेश गरेकी प्रधानले आफूलाई अभिनयमा अब्बल साबित गरिसकेकी छिन् ।
सिनेपाटी 2074, अश्विन 3, मंगलबार |
शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’को आज कुमारी हलमा भव्य प्रिमियर गरिएको छ । प्रिमियर शोमा चलचित्र क्षेत्रका सबै जसो कलाकारको उपस्थिति रहेको छ ।चलचित्रले भोलीबाट काठमाडौँ र मोफसलमा गरी करिब ९० बढी हलमा प्रर्दशन हुनेछ ।
७ तस्बिरमा केकी र नाजिरको प्रेम (फोटो फिचर)
नेपाली सिने नगरीमा अभिनेत्री केकी अधिकारी र अभिनेता नाजिर हुसेन नौलो नाम होइन् । अब्बल अभिनयका कारण चर्चामा रहने यी दुवै कलाकार एक साथ चलचित्र ‘राज्जारानी’मा देखिएका छन् ।
पहिरनमा सचेत साम्राज्ञी, कति सुहायो ? (फोटो फिचर)
चलचित्र ‘ड्रिम्स’बाट रजतपटमा प्रवेश गरेकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको पछिल्लो समय व्यस्तता बढ्दो छ । चलचित्र ‘ड्रिम्स’ पछि साम्राज्ञी अभिनित प्रदर्शनको तयारीमा छन् ।
सिनेपाटी 2074, श्रावण 8, आईतबार |
प्रसंशा बिच सम्पन्न भयो 'धनपति'को प्रिमियर सो (फोटो फिचर)
यस बर्षको प्रतिक्षित चलचित्र 'धनपति'को प्रिमियर सो सम्पन्न भएको छ । बिहिबार राजधानीको कुमारी हलमा चलचित्रको प्रिमियर सो सम्पन्न गरिएको हो । दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा खगेन्द्र लामिछाने मुख्य भूमिका रहेका छन् साथै कथा पनि खगेन्द्र लामिछाने कै रहेको छ ।
निखिल गर्दै छन् आफ्नै सालीसँग रोमान्स, हेर्नुस कतिको जम्यो जोडी (फाेटाे सहित)
अभिनेता निखिल उप्रेती आफ्नै साली शिवानी लुइटेलसँग चलचित्रमा रोमान्स गर्ने भएका छन् । भैरव पछि दोश्रो चलचित्र ‘कमिटमेन्ट’ निर्देशन गर्न लागेका निखिलको उत्त चलचित्रको यतिबेला धमाधम छायाँकन भइरहेको छ । तीन करोड बढी लगानी रहने बताईएको ‘कमिटमेन्ट’ मा चर्चित भारतीय कलाकारहरुले समेत अभिनय गरिरहेका छन् ।
करिष्मा र सलोनको याे कस्ताे प्रेम ? (फाेटाे फिचर )
नायक सलोन बस्नेत र नायिका करिश्मा श्रेष्ठको प्रेम चर्चा नेपाली चलचित्रमा चलेको केही वर्ष भयो । आफूहरू साथीहरू मात्र भएको भन्दै आउने करिश्मा र सलोन सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत एकसाथ पुग्ने गर्दछन् ।
कति सुहायो ‘प्रेमगीत २’मा प्रेम र गीतको जोडी ? (फाेटाे फिचर)
यही साउन १३ गतेबाट देशभर प्रदर्शन आउन लागेको चलचित्र ‘प्रेमगीत २’को प्रदर्शन मिति नजिकिएसँगै चलचित्रका टिममा प्रमोसनको दौडधुप बढ्दो छ । २०७२ मा प्रदर्शन भएको चलचित्र ’प्रेमगीत’को सिक्वेल रहेको ’प्रेमगीत २’ मा पुराना नायक प्रदीप खड्का छन् भने यसै चलचित्रबाट नव–नायिका अश्लेषा ठकुरीले डेव्यु गर्दै छिन्
गएको हप्ता नेपाली राजातपटमा सम्झन योग्य र महत्त्वपूर्ण खास केही भएन भन्न सकिन्छ । एक तिर चलचित्र समीक्षा काण्ड अर्को तिर हलमा बजार तताउने खालको चलचित्रको प्रदर्शन नहुनु । यसैबिच बाहिरी कुराले जति नै हलचल ल्याएता पनि नेपाली चलचित्र जगत् सधैँ झै चलायमान नै छ ।
सिनेपाटी 2076, असार 1, आईतबार |